ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြီး သေသပ်လှပတဲ့ Vivo Y53 Matte Black” - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
Lu Gyi Min
“ကင်မရာစွမ်းရည် ရမှတ်အများဆုံးနဲ့ စတိုင်…
“ကင်မရာစွမ်းရည် ရမှတ်အများဆုံးနဲ့ စတိုင်... Read more
Device Support-Huawei Price-279,000 မြ... Read more
“ ရိုးရှင်း မာကျောတဲ့ Nokia6” Nokia လိ…
“ ရိုးရှင်း မာကျောတဲ့ Nokia6”Nokia လို... Read more
ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ စမတ်ဖုန်းကောင်းကေ... Read more
Samsung တန်ဖိုးသင့် Handset တစ်လုံး ဝယ်မ…
Samsung တန်ဖိုးသင့် Handset တစ်လုံး ဝယ်မ... Read more
Mobile Phone လောကရဲ့ အလှည့်အပြောင်းအခင်း... Read more
သာမန် LCD တွေထက် ပိုမိုတောက်ပကြည်လင်တဲ့ …
သာမန် LCD တွေထက် ပိုမိုတောက်ပကြည်လင်တဲ့ ... Read more
ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြီး သေသပ်လှပတဲ့ Vivo Y5…
ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြီး သေသပ်လှပတဲ့ Vivo Y5... Read more
J5 (2016) ဟာ သူ့ယခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ နောင်တ... Read more
Samsung Galaxy J5 Prime - 1.4GHz Quad-C... Read more
Samsung A9 Pro ယခုတစ်ပတ်မှာ ဖော်ပြပေးမယ... Read more
Samsung Tab S3 9.7" Apple လည်းမသုံးချင်... Read more
Meizu M3E 239,000ks
Meizu M3E 239,000ks မင်္ဂလာပါခင်ဗ... Read more
Price – 269,000 Oppo သည် 16MP front-fac... Read more
သင့်ရဲ့ အလှအပတွေကို ပိုမိုတောက်ပစေမယ့် O…
သင့်ရဲ့ အလှအပတွေကို ပိုမိုတောက်ပစေမယ့် O... Read more
“လက်ထဲက မချချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားတဲ့ Mi…
“လက်ထဲက မချချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားတဲ့ Mi... Read more
" Selfie Camera နှစ်လုံးပါဝင်တဲ့ Vi…
" Selfie Camera နှစ်လုံးပါဝင်တဲ့ Vivo V5... Read more
“ကင်မရာပိုင်းကို ဦးစားပေး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့…
“ကင်မရာပိုင်းကို ဦးစားပေး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့... Read more
Samsung New Model [ Galaxy J7 Prime ]
Samsung New Model [ Galaxy J7 Prim... Read more
“ Miui 8 နဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲထုတ်ခဲ့တဲ့ Xiaom... Read more
Vivo ချစ်သူများအတွက် အသစ်ထပ်မံထွက်ရှိလာတ…
Vivo ချစ်သူများအတွက် အသစ်ထပ်မံထွက်ရှိလာတ... Read more
Samsung C9 Pro မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ကျယ... Read more
Kenbo Fly O31 PLUS
နည်းပညာသစ်တွေနဲ့ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ KE... Read more
Smart Phone လောက မှာ နာမည်တစ်ခုအခိုင်အမာ... Read more
ကျပ်ငွေ (၃)သိန်းစွန်းစွန်းပေးပြီး အနက်ရေ…
ကျပ်ငွေ (၃)သိန်းစွန်းစွန်းပေးပြီး အနက်ရေ... Read more
Samsung Galaxy J7 (2016)ကိုယ်ထည်ပါးလွှာပ... Read more
ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက် Mi Max 2
ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက် Mi Max2Mi MAX ဆို... Read more
Meizu U20 Camera နေရာက အလယ် ဒီဇိုင်းက ထ... Read more
Ultra HD ရုပ်ထွက်လန်းလန်းတွေကို မှတ်တမ်း…
Ultra HD ရုပ်ထွက်လန်းလန်းတွေကို မှတ်တမ်း... Read more
Dual Camera နဲ့ အဆင့်မြင့် နောက်ဆုံးထွက်…
Dual Camera နဲ့ အဆင့်မြင့် နောက်ဆုံးထွက်... Read more
ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြီး သေသပ်လှပတဲ့ Vivo Y53 Matte Black”
ဖက်ရှင်လောကမှာတော့ အနက်ရောင်ဟာ သိပ်ပြီး ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့အရောင်၊ သေသပ်လှပတဲ့ အရောင်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဖက်ရှင်ကျကျနဲ့ စမတ်ဖုန်းကောင်းကောင်း ကိုင်ချင်တဲ့ Vivo နှစ်သက်သူများအတွက်တော့ Vivo Y53 Matte Black ဟာ စွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
 Dual SIM (4G)
 Display5inches
 Snapdragon 425 processor
 Android version 6.0 (Marshmallo) +Funtouch OS 3.0
 ROM 16GB (up to 256GB), RAM 2GB
 Back camera 8MP (with Ultra HD), Front Camera 5MP
 2500mAh battery
Vivo Y53 Matte Black ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ကင်မရာပိုင်းမှာ 8MP ရှိတဲ့ ကျောဘက်ကင်မရာက Megapixel အရ နည်းသလို ထင်ရပေမယ့် သူ့မှာ အသုံးပြုပေးထားတဲ့ Ultra HD နည်းပညာက Megapixel 32 MP နီးပါးလောက် ပုံထွက်ကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကို ရရှိစေမှာလည်း ဖြစ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Eye Protection Mode ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ special feature တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက် ဒါမှမဟုတ် အလင်းရောင် အားနည်းတဲ့နေရာမျိုးမှာ စာဖတ်မယ့်သူများအတွက်တော့ အဆင်ပြေစေမယ့် စမတ်ဖုန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Dual SIM အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး 4G အထိ အသုံးပြုနိုင်မယ့် စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်း RAM 2GB နဲ့ 64-bit Qualcomm Snapdragon CPU အသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက် ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Premium ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းကိုမှ အနက်ရောင်ကာလနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ Vivo Y53 ရဲ့ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကတော့ ၅လက်မရှိပြီး Touch ပိုင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းတွင်း မှတ်ဉာဏ်အနေနဲ့ 16GB သာပါရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း External SD Card 256GB အထိ ထပ်မံ ထည့်စိုက်အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက် အချက်အလက် များများ အသုံးပြုချင်သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပေးထားတဲ့ ဘက်ရီကတော့ 2500 mAh ဘက်ထရီအမျိုးအစားကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ ၁၉၈,၀၀၀ ကျပ်သာရှိပါတယ်။ အခုလို သေသပ်လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှု ကောင်းတဲ့ Vivo Y53 Matte Black ကို ဆက်သွယ်မှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်ရဲ့ Hot Line နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ 09453344800 သို့ ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာ လူကြီးမင်း ဖုန်းဆိုင်များမှာလည်း သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…။
More in this category: « “ကင်မရာစွမ်းရည် ရမှတ်အများဆုံးနဲ့ စတိုင်လ်အကျဆုံး စမတ်ဖုန်း” “ ဈေးအသင့်အတင့်နဲ့ ယခုလထွက် စမတ်ဖုန်းသုံးချင်သူများအတွက် Huawei Y5 (2017) ” »
(၂)သိန်းဝန်းကျင်ထဲက ကင်မရာ အရည်အသွေးကောင…
(၂)သိန်းဝန်းကျင်ထဲက ကင်မရာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်များ ယခု တစ်ပတ်မှာတော့ (၂)သိန်းဝန်းကျင်ထဲက ကင်မရာ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်း မော်ဒယ် တချို့ကို ရွေးချယ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ #Samsung Galaxy J2 Prime - ၁၅၉,၀၀၀ ကျပ် Samsung Brand ထဲမှာဆိုရင်တော့ Samsung Galaxy J2 Prime ဟာ လက်ရှိမှာ လူကြိုက်များပြီး အဝယ်များတဲ့...
“လက်ထဲက မချချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားတဲ့ Mi 5X” Portrait Mode နဲ့ ရိုက်ရတာ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးပါပဲဗျာ....?Design မြင်ရုံနဲ့ မကိုင်ဘဲ မနေချင်လောက် ဖြစ်သွားစေတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi 5X လေး…။ Xiaomi ရဲ့ မော်ဒယ်သစ်လည်းဖြစ်၊ Dual Camera လေးနဲ့ ဆိုတော့ ကိုင်ပြီးရင် မဝယ်ချင်ဘဲ မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ။?ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ Full...
“ ရိုးရှင်း မာကျောတဲ့ Nokia6”Nokia လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာကို ပြေးမြင်မိသလဲ? အကြမ်းခံတယ်…လိုင်းဆွဲအားကောင်းတယ်….ဘက်ထရီ သက်တမ်း တာရှည်ခံတယ်….ဒီဇိုင်းမိုက်တယ်….Ring Tone ကို ကြိုက်တယ်….Father is Back … ဟုတ်ပါတယ်.. .. မိုဘိုင်းဖုန်းလောကမှာ ဘိုးအေကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Nokia ဟာ ပြန်လာပါပြီ။ အရင်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းတွေ .. OS...
Samsung Galaxy J5 Prime - 1.4GHz Quad-Core Processor, 2GB RAM With 16GB ROM-5Inch HD Display , Dual Nano SIM ,13MP Camera With LED Flash- 5MP Front Camera , Fingerprint...
Dual Camera နဲ့ အဆင့်မြင့် နောက်ဆုံးထွက် Processor ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းDual Camera ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့….Qualcomm ရဲ့ Snapdragon Processor ထဲမှာ အဆင့်မြှင့်ပြီး နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Processor ရယ် RAM6GB ရယ် ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို Blue Color အလန်းလေးနဲ့ သုံးချင်သူများအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။Mi 6...
“ ဈေးအသင့်အတင့်နဲ့ ယခုလထွက် စမတ်ဖုန်းသုံ…
“ ဈေးအသင့်အတင့်နဲ့ ယခုလထွက် စမတ်ဖုန်းသုံးချင်သူများအတွက် Huawei Y5 (2017) ” Huawei သုံးစွဲသူများကတော့ အကြမ်းခံတယ်လို့ Huawei အပေါ် ထင်မြင်ချက်ပေးကြပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့လည်း တကယ်ကို အကြမ်းခံ အသုံးခံတဲ့ စမတ်ဖုန်း Brnad တွေထဲက တစ်ခုလို့ သုံးသပ်ရမှာပါ။ ယခုလည်း ဈေးအသင့်အတင့်နဲ့ Huawei Y5 (2017) မော်ဒယ် ထွက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။...
ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြီး သေသပ်လှပတဲ့ Vivo Y53 Matte Black” ဖက်ရှင်လောကမှာတော့ အနက်ရောင်ဟာ သိပ်ပြီး ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့အရောင်၊ သေသပ်လှပတဲ့ အရောင်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဖက်ရှင်ကျကျနဲ့ စမတ်ဖုန်းကောင်းကောင်း ကိုင်ချင်တဲ့ Vivo နှစ်သက်သူများအတွက်တော့ Vivo Y53 Matte Black ဟာ စွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
“ကင်မရာစွမ်းရည် ရမှတ်အများဆုံးနဲ့ စတိုင်လ်အကျဆုံး စမတ်ဖုန်း” Mid-range ဖုန်းအမျိုးအစားတွေထဲမှာတော့ စတိုင်လ်အကျဆုံးနဲ့ ကင်မရာစွမ်းရည်အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအရ ၂၉၉,၀၀၀ ကျပ်သာ ရှိပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။Mid-range ထဲမှာ ကင်မရာဦးစားပေး စမတ်ဖုန်းက ဘယ်မော်ဒယ် ဖြစ်မလဲ ??
အကောင်းဆုံး၊ အကြမ်းခံဆုံး၊ ရေစိုခံစမတ်ဖု…
အကောင်းဆုံး၊ အကြမ်းခံဆုံး၊ ရေစိုခံစမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားရှိတယ် ဆိုတာ သင်မသိသေးရင် သင့်အပြစ် ဖြစ်သွားမှာနော်… အကြမ်းခံနိုင်မှု အဆင့်၊ ရေဒဏ်၊ သဲဒဏ် ခံနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းဟာ ဘယ် Brand ထဲက ဖြစ်မလဲ?မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၅ လက်မရှိပြီး အားကစားလုပ်ချိန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခရီးသွားရင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းခွင် လက်အိတ်စွတ်ထားပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ IPS LCD...
ကျပ်ငွေ (၃)သိန်းစွန်းစွန်းပေးပြီး အနက်ရောင်ကာလာနဲ့ Feature အစုံသုံးလို့ရမယ့် စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ် Vivo အနေနဲ့ သိပ်မကြာသေးခင်က မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Vivo V5 Matte Black ဟာ ဈေးနှုန်းအရပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူရဲ့ feature အရပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထူးခြားတဲ့ စမတ်ဖုန်း မော်ဒယ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Vivo V5 Matte Black ဟာ...
ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက် Mi Max2Mi MAX ဆိုတဲ့နာမည်ကြား လိုက်တာနဲ့ Screen ကြီးကြီး Battery များများ နဲ့ Performance ပိုင်းလည်း ပြောစရာမရှိအောင် ပြည့်စုံတဲ့ Mid Range ဖုန်းတစ်လုံးလို့ အားလုံး လက်ခံကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ။Mi MAX ကြီးကိုင်ရလို့မှ မဝသေးဘူး ဟော Mi Max2 ဆိုပြီးထပ်ထွက်လာပြန်ပြီ…
Sony ရဲ့ ဂန္တဝင်မြောက် ဖုန်းတစ်လုံး (သို…
Sony ရဲ့ ဂန္တဝင်မြောက် ဖုန်းတစ်လုံး (သို့မဟုတ်) Sony Xperia XA1 Sony Xperia XA1 – 369,000Sony Flagship စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ကိုယ်ထည် ဒီဇိုင်းပိုင်းဟာ မြင်တာနဲ့တင် ထူးခြားတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ခံစားမှုမျိုးလဲဆိုတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ရှေးကျတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပါ။ တစ်နည်းဆိုရရင်တော့ ဂန္တဝင်ဆန်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးပါပဲ။ အခု...
Samsung Tab S3 9.7" Apple လည်းမသုံးချင်ဘူး ဒါပေမယ့် တန်းမြင့် Android Tablet တစ်လုံးကို ရုံးလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြား ဘက်စုံသုံး ဖျော်ဖြေရေး စနစ်တစ်ခု အဖြစ်ပါသုံးချင်တယ်ဆိုရင် ဘာကိုရွေးရမလဲ.... ?Snapdragon 820...RAM 4GBAndroid Version 7.0 (latest)Super AMOLED Display ...Surrounding Audio System
Samsung C9 Pro မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ကျယ်ပြန့်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းလည်းကောင်းမွန်၊ ဂိမ်းအလန်းစားတွေလည်း အကောင်းဆုံး ဆော့ကစားနိုင်မယ့် Samsung C9 Pro နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Samsung ထွက်ခဲ့သမျှ မော်ဒယ်တွေထဲမှာ RAM6GB နဲ့ ပထမဆုံး ထွက်ရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Performance ပိုင်းကို ဦးစားပေး ထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင် 6.0…
Ultra HD ရုပ်ထွက်လန်းလန်းတွေကို မှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်မယ့် Vivo Y53…
Ultra HD ရုပ်ထွက်လန်းလန်းတွေကို မှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်မယ့်Vivo Y53… မကြာသေးခင်ကမှ အသစ်ထပ်မံထွက်ရှိထားတဲ့ လူငယ်တွေ အကြိုက် Vivo Y53 လေးကိုတစ်ချက်လောက် လေ့လာကြည့်ရအောင်….
" Selfie Camera နှစ်လုံးပါဝင်တဲ့ Vivo V5 Plus
" Selfie Camera နှစ်လုံးပါဝင်တဲ့ Vivo V5 Plus လူကြီးမင်းဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်ယူလို့ရပါပြီ " #VIVOV5PLUS 538000ks ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး Self Dual Camera ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်း ဖုန်းဆိုင်ကို အမြန်ဆုံးကြွလှမ်းခဲ့လိုက်ပါမိတ်ဆွေ။ အများနဲ့ မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ Selfie Experience တွေကို သင်ကောင်းကောင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်....................................//Self Camera Dual 20 MP…
“ကင်မရာပိုင်းကို ဦးစားပေး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Huawei GR5 2017”
“ကင်မရာပိုင်းကို ဦးစားပေး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Huawei GR5 2017” Social Media ခေတ်မှာ သင့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အမှန်တကယ်လှပစေဖို့အတွက် Huawei GR5 2017 က အသင့်ရှိနေပါပြီ။ ကင်မရာ ပိုင်းကို ပိုပြီးဦးစားပေးထုတ်ထားတဲ့ Huawei GR5 2017 ဟာ Huawei P9 ထွက်ရှိပြီး မကြာမီမှာ ထွက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအနေနဲ့လည်း…
Samsung A9 Pro ယခုတစ်ပတ်မှာ ဖော်ပြပေးမယ့် လူကြီးမင်း’s Choice အဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဖုန်းကတော့ဒီနေ့အထိရောင်းအားကောင်းပြီး လူကြိုက်များနေသေးတဲ့ Samsung A9 Pro ကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။Samsung A9 Pro ဟာ အကြမ်းခံခြင်း ၊ Battery အသုံးခံခြင်း ၊ ကိုယ်ထည် ဒီဇိုင်းဖွဲ့စည်းမှု ကျစ်လစ်ကောင်းမွန်ခြင်း ၊ Software များအသုံးပြုရာမှာ အထူးပေါ့ပါးသွက်လက်ခြင်း ၊ hardware စနစ်များကောင်းမွန်ခြင်း…
Meizu M3E 239,000ks မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဒီလကတော့ Handest အသစ်တွေ အပြိုင်အဆိုင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ လ လို့ပဲပြောရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။ Huawei,Samsung,Meizu,Xiaomi .. အစရှိတဲ့ နာမည်ကြီး Company တွေက နေ တန်ဖိုးနည်း/များ Handset တော်တော်များများကို ပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
Samsung တန်ဖိုးသင့် Handset တစ်လုံး ဝယ်မယ်ဆိုပါလျှင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် မော်ဒယ်သစ်….။
Samsung တန်ဖိုးသင့် Handset တစ်လုံး ဝယ်မယ်ဆိုပါလျှင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် မော်ဒယ်သစ်….။ Samsung J2 Prime 159000ks Only…Network - GSM / HSPA / LTE SIM - Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by)Display - 5.0 inches …
သင့်ရဲ့ အလှအပတွေကို ပိုမိုတောက်ပစေမယ့် Oppo A39
သင့်ရဲ့ အလှအပတွေကို ပိုမိုတောက်ပစေမယ့် Oppo A39 မျက်နှာပြင်ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်အကျယ်ကတော့ 5.2 အကျယ်ရှိပြီး IPS LCD Display အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ မြင်ကွင်းရုပ်ထွက်ကတော့ 720x1280 pixels ရှိတဲ့ ကြည်လင်တဲ့ ရုပ်ထွက်ကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည်ဖုန်းရဲ့ ကိုယ်ထည် ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ သပ်ရပ်ပြီး စမတ်ကျစေမယ့် Premium ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး ဖုန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို Corning…
Free Delivery Location
Online Sales: 09 77 9999 288 | 09 77 9999 277
2016 © Lu Gyi Min Cell Phone Villa. All right reserved. Developed by: OrientWebs